Sunday October 28, 2018 - 21:18:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbaahinta ku hadasha Afka ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo dowladda Federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay faafinaysay warar been ah oo ka dhan ah wilaayada Islaamiga Jubbooyinka.
Majirin wax duqeyn ah oo 72-dii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaannada iyo degmooyinka gobollada Jubbooyinka ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Xiriiro aan la sameynay dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta wilaayada ayay noo xaqiijiyeen in haba yaraatee wax dhib ah aysan wilaayada Kajirin gaar ahaan magaalada Kamsuuma.
War ku saabsanaa in duqeyn dad lagu dilay ay ka dhacday degmada Kamsuuma ee Jubbada Hoose oo ay faafisay warbaahinta Afka dowladda Farmaajo iyo AMISOM ku hadasha ayaa ah mid aasn sal laheyn "Majirin wax duqeyn ah oo ka dhacday magaalada Kamsuuma oo dadkeedu ay ku naaloonayaan ammaan iyo kala dambeyn, wararka ay idaacadaha afka cadowga ku hadla faafiyeen waa iska dacaayad raqiis ah oo xaqiiqda ka fog" ayuu yiri goob jooge ku sugan Kamsuuma.
Warar madax banaan ayaa xaqiijinaya in wax duqeyn ah aysan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay aysan ka dhicin deegaannada gobollada Jubbooyinka, ujeedka laga leeyahay faafinta warka nuucaan ah ayaa lagu sheegay dacaayad qeyb ka ah duullaanka lagusoo qaaday shacabka Soomaaliyeed.
"Wax cusub ma ahan in warbaahinta ay calooshood ushaqeysataashu adeegsadaan ay warar aan jirin ka sheegaan wilaayaatka Islaamiga ah. marka cadowga shisheeye uu diyaarado ku xasuuqo dadka shacabka ah ma sheegaan balse marka Nabad laheysto ayay warar been ah ka sheegaan magaalooyinka shareecada islaamka lagu maamulo" sidaas waxaa yiri mid kamida indheer garadka Jubbooyinka.